I-COVID-19: Ubhubhane waseCorona kunye noNxibelelwano lwaBantu | Martech Zone
NgoLwesibini, Meyi 5, 2020 NgoLwesibini, Meyi 5, 2020 UHardik Oza
Okukhona izinto zitshintsha, kokukhona zihlala zifana.
UJean-Baptiste Alphonse Karr
Inye into elungileyo malunga neendaba zosasazo: awudingi ukunxiba iimaski. Ungaphulula nantoni na nangaliphi na ixesha okanye ngalo lonke ixesha njengoko kusenzeka ngeli xesha le-COVID-19. Ubhubhane buzise iindawo ezithile ekugxilwe kuzo, zalola imiphetho ejikeleziweyo, zandisa iminyango, kwaye, kwangaxeshanye, zavala izikhewu ezithile.
Abantu abasebenza nzima njengoogqirha, aboncedo lokuqala, kunye nabo bondla amahlwempu benza njalo ngokuvala umlomo emva kwemaski. Abo bachaphazeleke kakubi sisifo kwaye bengenamfundo abafumani ndlela yokusebenzisa imithombo yeendaba ukuvumela umhlaba ukuba uve isikhalo sabo sendlala. Amanqatha atyiswe kakuhle abelana ngeendlela zokupheka kunye nokusebenzisa imithombo yeendaba zentlalo ukubonisa indlela abalisebenzisa ngayo ixesha.
Yintoni eyenziwa ngabaSasazo bezeNtlalontle kuBhubhane?
Facebook ingxelo wanikela ngeefemasks ezingama-720,000 kwaye wathembisa ngokufumana kunye nokubonelela ngaphezulu. Yenza isithembiso sokunikela nge-145 yezigidi zeedola kubasebenzi bezempilo nakumashishini amancinci.
Whatsapp wenze ifayile ye- I-Coronavirus hub yolwazi kwaye ivumele i-WHO ukuba isungule incoko yokulumkisa abantu malunga nomngcipheko we-coronavirus. Ibe Ingxelo ithembise nge-1 yezigidi zeedola ukuba Inethiwekhi yokujonga iNyaniso yePoynter yeZiko ukuxhasa ubumbano lwenyani ye-coronavirus ekhoyo kumazwe angama-45 ngokusebenzisa imibutho eyi-100 yendawo. Kukho i Ukwanda ngama-40% kwiWhatsapp ukusetyenziswa.
I-Instagram ifuna ukudunyiswa ukuthatha amanyathelo okuthintela ukusasazeka ulwazi olungelulo.
Twitter abasebenzisi bandile ngenani malunga ne-23% kwiinyanga ezintathu zokuqala ze-2020 kwaye iqonga livala ii-tweets ezinokuchaphazela ukusasazeka kwe-coronavirus. I-Twitter inikela nge- $ 1 yezigidi kwi IKomiti yokuKhusela iiNtatheli kwaye i Isiseko seendaba sabaseTyhini bamazwe.
LinkedIn kuvulwe iikhosi ezili-16 zokufunda ukuba abasebenzisi bangafikelela simahla kwaye ipapasha iingcebiso zeshishini malunga nento ekufuneka beyithumele ngexesha lobhubhane oqhubekayo.
Netflix uthembisa umxholo omtsha ukugcina abantu bonwabile ngexesha lokunyanzelwa kokutshixa.
I-YouTube yenza kancinci ngayo Uthintelog iintengiso ezinxulumene kwiCoronavirus.
I-Sprinklr iinkcukacha ezihlanganisiweyo ezibonisa i-COVID-19 kunye nemigaqo enxulumene ne-coronavirus ikhankanyiwe ngaphezulu kwamaxesha angama-20 ezigidi kwimithombo yeendaba, kwiindaba nakwiindawo zikamabonwakude.
Uluhlu luqhubeka kunye ngene, Twilley, kunye namanye amajelo eendaba ezentlalo angenela ngaphakathi. Oko konke kulungile kodwa abantu bayisebenzisa njani imithombo yeendaba zentlalo ngexesha lobhubhane?
Ukulunga kweendaba zeNtlalo
Abantu kufuneka bahlale ekhaya ngokunyanzelwa kwaye oko kukhokelela ekuchitheni ixesha elininzi kwimidiya yoluntu. I-80% yabantu itya umxholo kunye ne-68% yabasebenzisi abakhangela umxholo onxulumene nobhubhane. Ngombulelo, ayinguye wonke umntu odlula nje ixesha.
Bambalwa abemi abachaphazelekayo abayile iwebhu yentlalo apho banikezela kwaye bahambisa ukutya okuphekwe ekhaya kwabo basweleyo ngaphandle kokubonisa indawo zokufihla kunye nokhathalelo lwempilo olusisiseko kwabo basweleyo ezixekweni zabo. Umzekelo, iqela labantu baseMumbai laqala ukusebenzisa izixhobo zabo ukupheka ukutya nokusasaza abasweleyo. Ikhule yaba ngumnxeba woncedo kunye newebhusayithi enabantu abaninzi abazibandakanya nomsebenzi kwezinye iidolophu.
K Ganesh weBhasikithi enkulu, uJuggy Marwaha we-JLL, kunye noVenkat Narayana weQela le-Prestige basungule ukuqala UkutyaBangalore ukunceda abo babehlelelekile kwezoqoqosho ngeli xesha lobhubhane weCovid19. Baza kubonelela ngokutya malunga ne-3000 yabantwana abahlelelekileyo kunye neentsapho zabo Isiseko seParikrma soLuntu. Injongo yabo kukutya izidlo ezi-3 ze-lakh ngexesha lokutshixa.
Ikhredithi yomfanekiso: JLL
Ii-NGOs zenza konke okusemandleni abo ukubonelela ngokutya, ngezinto zokucoca umzimba, iikiti zokuthenga ukutya, kunye neemaski ngeli xesha lokuvalelwa kwesi sifo.
Abantu abadumileyo bangena ngeengcebiso ezingafunekiyo malunga nokuba ungakhuseleka kwaye ukhuselwe njani. Kucingelwa ukuba abantu bayalamkela ngakumbi ingcebiso xa livela kubantu abadumileyo.
Nangona kunjalo, kukho ezantsi, nazo.
Okubi kweendaba zeNtlalo
Xa indlala igcwele kwaye abantu belambile kukho abantu abadumileyo abasebenzisa amajelo eendaba ukubonisa iindlela zokupheka ezingaqhelekanga abazilungiselela njengendlela yokudlula ixesha.
Ayisiyi-Indiya kuphela kodwa kwihlabathi liphela, ngakumbi e-US nase-Yurophu, amaSilamsi abesezandleni zokufumana indawo yentiyo etyhola lonke uluntu ngobhubhane. Iindaba ezingeyonyani nevidiyo, kunye nokukhuthaza izithuba, ziyanda, nto leyo iyinto ebuhlungu.
Amaqela ezopolitiko azama ukwenza ifula ngelixa i-COVID Sun ikhanya. Banokubonisa uvakalelo ngakumbi endaweni yezopolitiko intsholongwane.
Njengesiqhelo abo banganyanisekanga basebenzise amajelo eendaba ezentlalo ukutyhala amayeza anganyanzelekanga anokuba yingozi kune-COVID-19. Abanye banqwenela ukuthengisa eli thuba. Abanye banikela ngengcebiso okanye iindaba ezinokulahlekisa ezinje: AmaTshayina acwangcise ngabom ukosulela ihlabathi aze athathe indawo…, Sipha amanzi kunye gargle ukuhlamba le ntsholongwane…, Yitya ikonofile ekrwada…, Sebenzisa umchamo wenkomo nobulongwe ..., Izibane ezikhanyayo kunye namakhandlela kunye nesiqhumiso sokutshisa i-corona… Abantwana abanakuyifumana… kwaye nangokunjalo. Kukho abantu ababonelela ngokulandela umkhondo ii-corona zokusebenza eziqukethe i-malware.
Intloko embi yobukomanisi ifumana umhlaba ochumileyo kwimidiya yoluntu kwaye isithuba sinokuqhubeka ixesha elide emva kokuba i-coronavirus inyamalale okanye ihlile.
Ukuthengisa ngeTouch Humane
Ubuhle beendaba zosasazo kukuba ungagxila kuphela ekukhuthazeni uphawu lwakho kunye nodumo kwaye unokulusebenzisa kuphela kunxibelelwano lwasentlalweni. Ukuthengisa namhlanje kutshintshile imeko yayo kancinane ukongeza i-patina enobuntu kwimisebenzi yayo.
Iinkampani ngoku zisebenzisa imidiya yoluntu ukubonisa inkxalabo kubathengi kwaye bafikelele ukunceda nangayiphi na indlela abanokuyenza, hayi uncedo olunxulumene nemveliso kuphela. Eli lixesha lokwakha ukuthembana, ukukhulisa ukuzithemba, kunye nokukhulisa ubudlelwane. Iinkampani ezikhathalayo zenza kanye loo nto. Fumana ubabalo namhlanje. Iya kuguqulela kwingeniso kamva kuba abantu bayakhumbula.
Abathengisi beDijithali basebenzise amagama aphambili ngokuthe ngqo avela kuphando. Ngoku kufuneka baphinde baphande ngamagama aphambili kugxininiso kumagama ahambelana ne-COVID-19 ukwenza ifuthe elahlukileyo nelichazayo kwiithagethi. Omnye makayigcine engqondweni iBrandwatch yokufumanisa ukuba uluvo olujikeleze izithuba ezinxulumene nentsholongwane ye-corona ikakhulu alulunganga.
Inye kuphela into ephawulekayo malunga Iziphumo zobhubhani kwimidiya yoluntu Kungenxa yokuba i-YouTube, i-Facebook, kunye ne-Twitter zisebenzela ukwenza idemokhrasi kulwazi kunye nokukhupha izithuba eziyityhefu.
Ukusuka kwimbono ebanzi, umntu unokuthi abo basebenzisa imidiya yoluntu ukwenza okuhle baya kwenza njalo kwaye abo bathambekele ekusebenziseni imidiya yoluntu ukwenza ububi baya kwenza njalo. Ubhubhane utshintshe izinto kancinane kwimidiya yoluntu kodwa, njengoko besitsho, izinto ziya ziguquka, kokukhona zihlala zinjalo. Siza kwazi, kwiinyanga ezintandathu ukusukela ngoku.
tags: i-covid-19ukukhangelaUJuggy MarwahaK GaneshNetflixbhubhaneiqela lodumoimidiya yoluntu kakubiimidiya yoluntu elungileyoTwitterwhatsappyoutube